Ubulungisa bubungqibelelo bokuziphatha obufunwa nguThixo ukungena ezulwini .
Nangona kunjalo, iBhayibhile ibonisa ngokucacileyo ukuba abantu abanako ukuphumeza ubulungisa ngemizamo yabo: "Ngoko ke akukho mntu uya kuthiwa ulungile emehlweni kaThixo ngemisebenzi yomthetho, kunoko, ngomthetho siyaqaphela isono sethu." (Roma 3:20, NIV ).
Umthetho, okanye iMithetho Elishumi , ibonisa indlela esingaphantsi ngayo imigangatho kaThixo.
Isisombululo esisodwa kweso sifo sisicwangciso sikaThixo sokusindiswa .
Abantu bathola ubulungisa ngokukholwa kuYesu Kristu njengoMsindisi. UKristu, uNyana kaThixo ongenasono, wathatha isono sakhe phezu komntu waza waba ngumnikelo olungeleyo, ogqibeleleyo, evezela isijeziso esilungelwe ngabantu. UThixo uYise wamkela idini likaYesu, apho abantu bangakwazi ukulungiswa .
Ngako oko, amakholwa athola ubulungisa obuvela kuKristu. Le mfundiso ibizwa ngokuba yi-imputation. Ubulungisa bukaKristu bufezekiswe kubantu abangafezekanga.
ITestamente Endala isitshela ukuba ngenxa yesono sika- Adam , thina, inzala yakhe, sizuze isono sakhe. UThixo wamisa inkqubo kwixesha leTestamente Elidala apho abantu babingelela khona izilwanyana ukuze bahlawulele izono zabo. Ukuchithwa kwegazi kwakudingeka.
Xa uYesu wangena kwihlabathi, izinto zatshintsha. Ukubethelelwa kwakhe nokuvuka kwakhe kwanelisekile ubulungisa bukaThixo.
Igazi likaYesu elaphalazi lihlanganisa izono zethu. Akukho mnikelo okanye umsebenzi ofunekayo. Umpostile uPawulos uchaza indlela esifumana ngayo ubulungisa ngoKristu kwincwadi yamaRoma .
Usindiso ngolu hlobo lokubulungisa luyisipho samahhala, leyo imfundiso yenceba . Usindiso ngobabalo ngokholo kuYesu luyintloko yebuKristu.
Ayikho enye inkolo inika ubabalo. Bonke bafuna uhlobo oluthile lwemisebenzi egameni lomthatha inxaxheba.
Ukubhengezwa: RITE chuss ness
Eyaziwayo Njengaye: ukuthe tye, ubulungisa, ukungabi namkhethe, ubulungisa.
Ubulungisa bukaKristu buyalelwa kwiakhawunti yethu kwaye buzingcwalise phambi koThixo .
Ivesi leBhayibhile malunga nokuLungisa
KwabaseRoma 3: 21-26
Kodwa ngoku ubulungisa bukaThixo bubonakaliswe ngaphandle komthetho, nangona uMthetho nabaprofeti befaka ubungqina kuyo-ubulungisa bukaThixo ngokukholwa kuYesu Kristu kubo bonke abakholwayo. Ngokuba akukho nantlukwano; ngokuba bonke bonile, bawela kukuzuko lukaThixo, balungiswa ngobabalo lwakhe njengesipho, ngokukhulula okukuKristu Yesu, abo uThixo ababeka phambili njengento yokuhlawulela ngegazi lakhe, ukuba zifunyenwe ngokholo. Oku kwakukubonakalisa ubulungisa bukaThixo, ngenxa yokunyamezela kwakhe uThixo wayedlulele kwizono zangaphambili. Kwakungokubonakalisa ubulungisa bakhe ngexesha langoku, ukuze abe nobulungisa kunye nomgwebo wolukholo kuYesu.
(Imithombo: I- Expository Dictionary yamazwi eBhayibhile , ehleliwe nguStephen D. Renn; i- New Topical Bookbook , ngu-Rev. RA Torrey; i- Holman Illustrated Bible Dictionary , ehleliwe ngu-Chad Brand, uCharles Draper, no-Archie England; kunye neThe New Unger's Bible Dictionary , ngu Merrill F.
Indlela Yokukhuthaza Umntwana Wakho Ukufunda
I-Indian Colonial kwiiKhathuthi
AmaPagan kunye neNkolelo yokuBonga